Mohamed Salah Oo Jabiyay Rikooro Cusub Oo Gool Dhalinta Liverpool Ah Kulankii Everton
HomeSuuqa kala iibsigaMohamed Salah oo jabiyay rikooro cusub oo gool dhalinta Liverpool ah kulankii Everton
December 2, 2021 Suuqa kala iibsiga, Horyaalka Ingiriiska, Wararka Ciyaaraha 0
Mohamed Salah ayaa jabiyay rekoodh kale oo uu Liverpool ka sameeyay kulankii Merseyside derby ee Xalay la Ciyaareen Kooxda Everton .
Xiddiga reer Masar ayaa dhaliyay dhaliyay Labo Gool Kulan ka dhacay Goodison Park waxana uu ahaa goolkii 500aad ee Liverpool ay ka dhaliso Premier League ee uu hogaamiyo Jurgen Klopp .
Dhammaystirkaasi waxa uu sidoo kale ahaa in Salah uu si toos ah ugu lug lahaa gooldhalinta kulankii toddobaad ee isku xigta ee Premier League, taasoo ah wax uusan waligeed ku guuleysan ciyaaryahan kale oo Liverpool ah.
Salah ayaa gool dhaliyay ama caawiye ka ahaa kulan kasta oo horyaalka ah oo ay ku ciyaartay meel ka baxsan garoonka Reds xilli ciyaareedkan, waxaana uu ku daray gool labaad qeybtii labaad ee Goodison si uu u sameeyo ilaa sagaal gool oo uu ku dhaliyo Banaanka in ka badan laba jibaar qof kasta oo kale. .
29-sano jirkaan ayaa solameeyay rikooro badan intii lagu jiray bilow wanaagsan 2021-22, taasoo keentay inuu dhaliyay 19 gool 19 kulan oo tartamada oo dhan ah.
Horyaalka Premier League-ga, Salah ayaa hadda ku fadhiya kaalinta koowaad ee gooldhalinta iyo caawintaba, isagoo 13 gool dhaliyay, siddeed kalena caawiyey 14 kulan oo uu saftay.
Labada gool ee habeenkii Arbacada ayaa sidoo kale la macno ah in uu yahay xiddigii ugu horeeyay ee Liverpool ah ee laba gool ka dhaliya meel ka baxsan garoonka Merseyside derby tan iyo Fernando Torres oo dhacay Sebtember 2008dii.